Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaalil Bukhaari- Q1aad | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Qoraalkan waxaan kasoo guuriyay Risaalo yar oo laga qoray Shekh Muxamed ibnu Cabdullah As-somaal duruustiisa mid kamid ah. Waxaa qoray risaaladaas Fahad ibnu Cali Alkishiy. Waxuuna risaalada u bixiyay
” القواعد المفيدة في معرفة اسماء الرجال المذكورين في جامع الامام البخاري “
Waxay risaaladu ka hadlaysaa qaacidooyin ku saabsan sida lagu kala baran lahaa ragga ruwaada ah ee Imaam Bukhaari sixiixiisa ku jira.
Runtii aad bay muhiim ogu tahay qof welba oo arday ah inuu qawaacidooyinkan meel ku xifido sababtoo ah waxay ka caawinaysaa inuu kala saaro culimada isku magaca eg. Tusaale waxaa laga yaabaa inaad aragto Imaam Bukhaari xadiis kamid ah axaadiista isagoo odhanaya ” Xadathanaa Xumeydi can Sufyaan”, waxaa laga yaabaa inaad is tidhaahdo talow wa ayyo Sufyaankan ? Ileen Sufyaanadu waa badanyihiinee..
Hadaba Sheekha iyo walaalka qorayba kheyr Allaha siiyee waxay naga caawinayaan wareerka aan kala kulmi lahayn ruwaada xadiithka ee isku magacyaha eg.
Walaalka qoray risaalada markuu dhameeyay waxuu usoo bandhigay imaam Muxamed As-soomaal si uu oga saaro waxii khalad ah ee ku jira.
Risaaladu af carabi ayay ku qornayd waxaanse isku dayyi inaan turjumo in sha Allah ( anoo soo koobaya).
Sidan ayaan u qorayaa Risaalada in sha Allaah:
1) Si alphabet ahaan ayaan usoo kala hormarin magacyada ruwaada
2) Magacyada afsoomali maadama aan ku qorayo waxaa laga yaaaba inay yara kala duwanaadaan waxyar xagga af carabiga iyo af somaliga 3) In sha Allaah sadex ilaa afar qaybood inaan ka dhigo ayaan ku tala jiraa. Sababtaan u kala qaybiyay waxaa weeye si ay akhristayaashu u xifidaan kolba intaan soo geliyo. Waxaan Ilaahay ka baryayaa aniga iyo walaalaha akhrisanayaba inay nawada anfacdo, sidoo kale Sheekh Muxamed As-soomaal iyo Fahad binu Cali iyo dhamaan intii faafisayna ajar aan la koobi karin Allaha ka siiyo- Aamiin
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaalil Bukhaari- Q1aad
← Sheekh Muqbil binu Haadi
Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaali Bukhaari- Q2aad →